यौन इच्छा बढाउने उपाय – MeroJilla.com
सतर्कता केन्द्र नै अस्तव्यस्त
बर्राचौरमा खानेपानीको प्रसारण लाईन बिग्रिदा हाहाकार ।
लस्ती पहिरो पिडितलाई जिल्लाका नागरिक संगठनहरुको सहयोग
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पर्वतको अध्यक्षका दावेदार मेघनाथ सुवेदीको योग्दान यस्तो छ ।
जनताको घर घरमा पूर्व सांसद अर्जुन जोशी,असहाय र रोगीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै
मञ्जु पौडेललाई सन्तु थापाले छम्म छम्म नाचेको भन्दै शिरमा पहेंलो फुल लाईदिए पछि…………….
विदेशी कम्पनीले भुक्तानी रोक्दा रेमट्यिान्समा कमी
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पर्वतको चौंथो पदस्थापना सम्पन्न
कुश्मा नगरपालिकाको भवन सार्न माग ।
पहिरो पिडितको पिडामा मलम लगाउँदै सांसद गिरी
यौन इच्छा बढाउने उपाय
दाम्पत्य जीवनमा यौन एक नभई नहुने कुरा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यौनले दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउने गर्दछ । हामीले हाम्रो समाजमा यौन चाहनाको पूर्ति नभएर कति दम्पति डिभोर्सको केस सम्म पुगेको सुनेका छौ । यसर्थ दम्पतिको सम्बन्ध सुधारका लागि यौन इच्छा हुनु स्वभाविक मानिन्छ ।
यौन इच्छा प्राकृतिक उपाय अपनाएर बढाउन सकिन्छ । ह्रास हुँदै गएको यौन क्षमतालाई केही प्राकृतिक उपायले केही उर्जा भर्ने काम गर्नेछन् । यति कोही व्यक्ति दिनहुँ जस्तो अल्कोहल पिउने गर्दछ भने स्वभावतः पछि गएर उसको यौन इच्छामा कमि आउँछ । यसर्थ अल्कोहल पिउन कम गर्नाले मानिसको यौन इच्छामा वृद्धि हुन्छ । त्यसैगरी अल्कोहलको अलवा चुरोट लगायतका शरीरलाई हानी गर्ने पेय पदार्थलाई छोड्न वा कमि गर्न सके यौन इच्छा वृद्धि हुने चिकित्सकको भनाई रहेको छ । धुम्रपानले यौनाङगको रक्त बहावलाई असर गर्दछ । तर्सथ चुरोट बन्द गर्नु उत्तम हुन्छ । दैनिक २० मिनेटको शारीरिक कसरतले योनाङगको रक्तबहावलाई चुस्त दुरुस्त राख्दछ । विहान शारीरिक व्यायाम गर्नु सबै भन्दा फलदायी हुन्छ ।
त्यस्तै यौनबर्धक खानपिनमा पनि ध्यान दिन सके यौन इच्छा बढ्ने गर्दछ । प्रेम बढाउने कुनै पेय पदार्थ त छैन तर यौनबद्र्धक खानाले मनोरंजन भने दिन सक्छ । फलफूलको समुचित खानपिनले यौन क्षमतामा वृद्धि ल्याउँछ । त्यस्तै कुरिलो, काजु–किस्मिस, ओखर, समुद्री ओयष्टर जस्ता खानेकुरा यौन बद्र्धक खानेकुरा हुन् । त्यस्तै योग आसन पनि उपयुक्त हुन्छ । योगमा त झन यौन समस्या समाधान गर्ने धेरै आइटमहरु पनि छन् ।
यौन क्षमता बढाउन अत्यन्त जरुरी अर्को उपाय हो पेटलाई सानो आकारमा ढाल्न सक्नु पर्दछ । शरीरको तौल बढी हुनु आफैमा रोग भएकाले तत्कालै पेट घटाउन चिकित्सको सुझाव छ । शरीर भद्दा हुने वित्तिकै यौनेच्छा पुर्णत घटेर जाने हुँदा यसलाई बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदी यि उपाय राम्ररी अपनाएको खण्डमा यौन जीवनले सार्थकता पाउनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
यी साधानः प्रयोग गर्दैनन् किशोरकिशोरी !	Sunday, July 15th, 2018
महिलाले किन रोज्छन् पाको पुरुष सेक्सको लागी ? जानुहोस् तथ्य	Tuesday, July 3rd, 2018
अपार्टमेन्टमा युवती लगेर ‘रासलिला’ गर्ने यी हुन सट्टेबाजीको बादशाह नागराज	Tuesday, July 3rd, 2018
किशोरकिशोरी यौन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न थाले	Sunday, June 17th, 2018
याैन सम्पर्क गर्दा महिलाको ज्यान गयो	Thursday, May 31st, 2018
महिलाहरु यौन सम्पर्क शुरु हुनु अघि के चाहन्छन्?	Monday, May 14th, 2018
सतर्कता केन्द्र नै अस्तव्यस्त July 21, 2018
बर्राचौरमा खानेपानीको प्रसारण लाईन बिग्रिदा हाहाकार । July 21, 2018
लस्ती पहिरो पिडितलाई जिल्लाका नागरिक संगठनहरुको सहयोग July 21, 2018
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पर्वतको अध्यक्षका दावेदार मेघनाथ सुवेदीको योग्दान यस्तो छ । July 20, 2018
जनताको घर घरमा पूर्व सांसद अर्जुन जोशी,असहाय र रोगीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै July 20, 2018
मञ्जु पौडेललाई सन्तु थापाले छम्म छम्म नाचेको भन्दै शिरमा पहेंलो फुल लाईदिए पछि……………. July 20, 2018
विदेशी कम्पनीले भुक्तानी रोक्दा रेमट्यिान्समा कमी July 20, 2018
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पर्वतको चौंथो पदस्थापना सम्पन्न July 20, 2018
कुश्मा नगरपालिकाको भवन सार्न माग । July 20, 2018
पहिरो पिडितको पिडामा मलम लगाउँदै सांसद गिरी July 19, 2018
सवै छोरी माईतीको शरण मैलिक तिज एलबम बोकेर आए राजन कार्की र राजेन्द्र ढकाल July 19, 2018
ओलीसँग बदला लिने मुडमा गौतम July 19, 2018
बागलुङ:युवा उद्यमीलाई अनुदान July 19, 2018
तोकिएको समयमा नै पोखरा विमानस्थल निर्माण सकिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री July 19, 2018
मध्यपहाडि लोकमार्गको गल्कोट अर्लेखोलामा जिप दुर्घटना पत्रकार उजिर मगर सहित ४ जनाको अवस्था गम्भिर July 19, 2018
जनसम्पर्क समिति स्पेनको साधारण सभामा केन्द्रीय नेताहरु आउने
स्पेन । नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेनको कार्यसमितिको जुन ९ तारीख़मा बसेको नियमित बैठकले साधारण सभाको मिति तय गरेको छ । वर्तमान कार्यसमितिको २ बर्षे कार्यकालको लगभग आधा भन्दा बढ़ी अवधि सकिसकेको छ र संस्थाको.....
लण्डन । नेपाली डायस्पोराको पुरानो र प्रतिष्ठित सञ्चार संस्था नेपाल ब्रिटेन डटकमले आफ्नो एघारौँ वार्षिकोत्सव.....